Inona no atao hoe famerenana amin'ny laoniny? | Reef Resilience
Ireo mpiaramiasa sy mpitantana ny haran-dranomasina dia mety maniry ny handinika ny famerenana amin'ny laoniny hanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina simba na simba na ny toeram-ponenan'ny vatohara. Sakafo ara-tontolo iainana dia voafaritry ny Ny Society of Ecological Restoration dia toy ny "dingan'ny fanampiana ny famerenana ny tontolo iainana izay simba, simba, na potika." ref Noho izany, ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny dia mikendry ny hamerenana ny endriky tranonkala tsy misy dikany, na tsy misy ifandraisany, na amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny karazana fivarotana, ny tranon-tsakafo ary ny fiasa ara-tontolo iainana mahasalama.
Famokarana vato hormonina ao amin'ny Valam-pirenena Dry Tortugas. Sary © Carlton Ward
Ny famerenana amin'ny laoniny ara-tontolo iainana dia mety hampiditra paikady maotina sy mavitrika. Tetik'ady famerenana amin'ny laoniny ampidiro ny hetsika fitantanana izay miaro ny toeram-ponenana ary manome alalana ny fanarenana voajanahary sy ny fanatsarana ny ekolojia. Ireo paikady ireo dia mety ahitana faritra arovana an-dranomasina izay mampiroborobo ny fikolokoloana voa sy ny fanalefahana ny hazakazaka an-tanety sy ny fandotoana ny tany. Famerenana amin'ny laoniny Ny paikady dia misy ny fidirana mivantana izay mikendry ny hanafainganana ny fanavaozana, ary mety hampiditra paikady toy ny fambolena haran-dranomasina sy famindrana na hanesorana ny macroalgae. Ity modely ity dia hifantoka amin'ny teknika fampidirana sy fanelanelanana mavitrika.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia tokony ho raisina ho fomba fanao faharoa amin'ny fitehirizana ny toeram-ponenan'ny vatohara tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny hetsika fitantanana mahomby. Ny famerenana amin'ny laoniny ho an'ny Coral dia mety ho tsy mahomby raha atao ho toy ny tetik'ady fitantanana irery ary tokony hampiasaina ao anatina ambaratonga lehibe kokoa drafitra fitantanana izay mampihena ny fitomboan'ny adin-tsaina talohan'ny fanondranana ny haran-dranomasina. Ny mpikarakara sy ny mpitsabo ihany koa dia tokony handinika ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny fanapahan-keviny momba ny famerenana amin'ny laoniny, satria mety hiteraka fahombiazana maharitra sy fandaharam-potoana maharitra ny fisehoan-javatra ho avy.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Center for Restoration
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSociety of Resource Centers Resource Center